Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia Lumia 710/800/900/910
1 Waxaan soo kabsado sawirada tirtiray karaa Nokia Lumia 800?
waxaan tirtiray qaar ka mid ah sawirada iyo filimada aan Nokia Lumia 800 accedentially . Ma aan helin wax "qashin" ama wax la mid ah in aan Lumia 800. qof i caawin kartaa inuu ka soo kabsado iyaga?
Ma jiro qashinka la mid ah sida on your computer, halkaas oo faylasha aad tirtiray waa la badbaadin doonaa marka hore. Sida caadiga ah, files warbaahinta oo ay ku jiraan sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ku kaydsan yihiin kaadhka xusuusta gudaha telefoonka Lumia. Marka aad tirtiray files kuwa, ay la calaamadeeyay doonaa sidii aan waxtar lahayn oo noqon aan la arki karin. Si kastaba ha ahaatee, taas macnaheedu ma aha in ay weligeedba way tageen. Si kale haddii loo dhigo, kaliya meesha in ay qabsadeen laga calaamadeeyo sida banaan oo diyaar u ah files cusub. Weli waxaad leedahay fursad fiican in ay soo kabsadaan photos tirtiray, videos ka Nokia Lumia telefoonka ka hor inta aysan soo overwritten by files cusub.
Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in aad telefoon ama kaadhka xusuusta ka overwritten ilaaliyo, ama ka soo kabashada Nokia Lumia adkaan doonto.
2 tallaabooyinka soo kabsaday photos & videos tirtiray ka Nokia Lumia
First of dhan, heli Nokia Lumia qalab kabashada sawir trustable. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama, Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks) waxay noqon kartaa doorasho fiican. Labadooduba waxay taageero wanaagsan oo sawir, video iyo soo kabashada audio ka Nokia Lumia, wax aad isticmaalayso Lumia 910, 900, 800, 710, iwm Waxaa kuu ogolaanaya in aad ku eegaan dhammaan sawirrada ka hor inta aadan soo kabsado iyaga.
Isku day version maxkamad free of this software kabashada Nokia Lumia hadda. Soution oo dhan oo keliya qaadataa 3 tallaabo.
Tallaabada 1 Connect aad Nokia Lumia in kombiyuutarka
Ka hor inta aanay is bilaabay, xiriiriyaan phone in kombiyuutarka. Ama waxaad dooran kartaa in ay ku xidhmaan kaadhka xusuusta la akhristaha kaarka. No arrinta habka aad dooratid, hubi in uu ka soo muuqan doonaa sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" on interface ugu weyn ee soo socda.
Tallaabada 2 baarista Nokia Lumia u tirtiray photos, videos
Marka soo tallaabada 2, waxaad heli doontaa interface ah soo socda. Waxaad phone badanaa u muuqata sida warqad drive Waxaan ama H. ​​u Dooro oo guji "Scan" si ay u baadhaan tirtiray photos, videos iyo music ah. Haddii aad rabto in aad kaliya photos dib, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan oo isticmaalaya "Filter Options".
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos & videos ka Nokia Lumia
Hadda, waxaad eegi kartaa sawiro, video iyo files audio mid mid in tallaabadaas. Fiiri kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Nokia Lumia ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir Nokia Lumia
> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia Lumia